Sheekada filimka AndhaDhun: filim qayaano oo heer sare lana sadaalin karin waxa xiga ee dhacaayo! – Filimside.net
Sheekada filimka AndhaDhun: filim qayaano oo heer sare lana sadaalin karin waxa xiga ee dhacaayo!
Bollywood-ka waxay sameeyeen xiliyadan casriga ah aflaan hogaamiyaashooda ay camoole ama indhoole yihiin waxaana ka mid ah filimadaas xiisaha badan KAABIL , AANKHEN , BLACK , FANAA , LAFANGEY PARINDEY  iyo kuwo kale.
Haatana Director Sriram Raghavan oo lagu yaqaano filimada fariinta qayaanada xambaarsan ayaa la imaaday mashruuca ANDHADHUN oo hogaamiyaha filimkan Ayushmann Khurrana indhool yahay.
Jilaayaasha filimkan: Ayushmann Khurrana, Tabu, Radhika Apte, Manav Vij, Anil Dhawan
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay ANDHADHUN: Waa filim qayaano oo aan marnaba la sadaalin karin waxa xiga ee dhici karo, muusigiis wacan iyo bandhiga hogaamiyaasha oo heer sare ah.
Muxuu Ku Liitaa Filimka ANDHADHUN: Halka saac dambe waxyar oo caajis ah ayaa meelaha qaar ku jiro waxaa fiicneyd in 15-daqiiqo dheeriga ku ah laga jaro si filimkan adigoo indhaha taagayo u dhamaado!
Fariinta Filimka ANDHADHUN Oo Kooban: Mashruucaan wuxuu ka hadlaa nin indhool ah oo fanka wax ka yaqaano sidoo kalena aan dhib badneyn balse baxar weyn dhexda ka galaayo marka kiis dil ah isaga loo maleego inuu ka dambeeyay.
Akash (Ayushmann Khurrana) waa indhool biyaanada garaaco kaasi oo Pune ku nool wuxuuna maalin asigoo wada maraayo isku dhacayaan shil ahaan gabbar lagu magacaabo Sophie (Radhika Apte) waxayna gabadhan iyo aabaheeda isla maamulaan maqaayad aabaheedna waxaa la dhahaa Franco.
Sophie (Radhika Apte) iyo Akash (Ayushmann Khurrana) is baranayaan waxayna ka helee xirfada uu leeyahay sida uu biyaanada u garaaci yaqaano waxayna shaqo ka siineyaa maqaayadeeda si uu dadka u mada daaliyo kadibna Akash (Ayushmann Khurrana) wuxuu noqonaa shaqsi macaamiisha soo jiito oo maqaayada saameyn ku yeesho.
Waxaana dhaceyso in Akash (Ayushmann Khurrana) iyo Sophie (Radhika Apte) jaceyl dhex maraayo go’aana ku gaarayaan nolosha inay wadaagaan madaama is fahan dheeraad ah dhex maraayo.
Nin lagu magacaabo Pramod Sinha (Anil Dhawan) kaasi oo filimada jilista xili hore isaga fariistay ayaa maqaayada macmiil ka ah waxayna saaxiibo yihiin mudane Franco isagana wuxuu ka helaa bandhiga quruxda badan ee Akash biyaanada ku sameeyo.
Pramod Sinha (Anil Dhawan) waa nin reer leh waxaana u dhaxdo Simi (Tabu) waxayna u heysaa gabbar xaaskiisii hore u dhashay wuxuuna aqalkiisa ku balaminaa Akash si sanad guurada arooskiisa uu heeso ugu qaado qoyskan biyaanada si wacan ugu garaaco.
Waxaana la yaab ah isla habeenka Pramod Sinha (Anil Dhawan) uu gurigiisa Akash ku balamiyay inuu xaaskiisa Simi (Tabu) u sheegayo inuu Benglore aadayo qorshihiisana wuxuu yahay xaaskiisa inuu xaflada sanad guurada arooskooda la yaab ooga dhigo.
Laakiin maalinta xigta Pramod Sinha (Anil Dhawan) marka uu gurigiisa imaado wuxuu si naxdin leh u arkaa xaaskiisa Simi (Tabu) oo la jiifto jaceylkeeda Mahendra (Manav Vij). Aqalka buuq ayaa ka dhacaayo waxaana la tooganayaa Pramod Sinha!
Daqiiqado kadib waxaa guriga imaanayo Akash oo islahaa Pramod Sinha kula balamay gurigiisa tag si u xaflada uga qayb galo!
Haddaba waxa xiga ee filimkan loo daawan doono ayaa ah ah Akaash dabinka uu ku dhacaayo, Pramod Sinha yaa dilay iyo Simi (Tabu) kaalinta ay ku leedahay dilka seygeeda?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka ANDHADHUN: Sheekadan filimkan waxaa laga soo min gururiyay filimka Faransiiska ah L’ACCORDEUR balse waxyar ayaa laga badalay si fariintan dadka Hindiga ah u daawan karaan.
Director Sriram Raghavan waa mid caan ku ah sameynta filimada fariinta Thriller ama qayaanada xambaarsan wuxuuna horey u sameeyay filimada EK HASINA THI , JOHNNY GADDAAR  iyo BADLAPUR  oo dhamaantooda sheeko ahaan aad looga wada helay haatana Andhadhun ayuu la yimid oo ka mid noqon karo liiska aflaanta sare madaama filim sameeyahan hanaankii lagu yaqiinay uu aflaanta u sameeyo waxba ka qaldin.
Andhadhun inaba caadi ma ahan 10-daqiiqo ama 15-daqiiqo kasto arin lama filaan ah ayaa dhaceyso waana filim aan la sadaalin karin waxa xiga ee dhacaayo taasi oo kugu qasbeyso ilaa dhamaadka filimkan ka sal gaar inaad is dhahdid halka wax ku dhamaanayaan kaliya waxaa fiicneyd in 10-daqiiqo ilaa 15-daqiiqo laga jaro waqti ahaan qaybaha dambe oo waxyar habacsanaan ku jirto.
Bandhiga Jilaayaasha: Ayushmann Khurrana door dhib badan ayuu doortay laakiin si caalami ah ayuu kaga soo baxay atoorahan lama buun buuniyo laakiin marwalbo wuxuu sameeyaa aflaan cajiib badan isagana waa mid filimka Andhadhun ku muujiyay inu door walbo sameyn karo xirfad ahaana dhalinta Bollywood-ka uu in badan ka horeeyo.
Waaw Tabu door adag ayay qaatay bandhiga saameyn weyn lehna filimkan wey ka sameesay run ahaantii atirishadan ruug cadaaga ah sinaba Bollywood-ka kagama maarmaan filim walbana waa filimkeeda door walbana waa doorkeeda!
Radhika Apte doorkeeda wuu wacan yahay halka saac ee hore balse marka ay sheekada isku daba dhacdo halka saac sambe atirishadan muuqaal ahaan wey ku yar tahay marka filimkan Ayush iyo Tabu ayuu ka dhaxeeyaa dooararka adag. Sidoo kalena Anil Dhawan iyo doorkiisa Parmod Sinha waa mid cajiib badan oo saameyn wacan leh.
Dhamaan jilaayaasha kale ee filimkan kasoo muuqdeen doorarka caawiyaha ku leh wey ka baxsadeen waxaana ugu wacan inay dhacdo kasto ama qayaano kasto qayb ka yihiin.
Gunaanad: Andhadhun waa filim qayaano oo si heer sare ah loo sameeyay balse nasiib daro hadal heyn xoogan ma xambaarsano mana loo sameynin suuq geyn balaaran sidaa darteed fagta hore si hoose ayuu ku furmi doonaa balse waa macquul sheekadiisa wanaagsan awgeed maal maha xiga sabti iyo axad inuu ganacsi wacan sameeyo kadibna tiyaatarada uu baaqi kusii ahaado.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Andhadhun kadibna mashruucaan xiisaha badan fikiraakaga ka dhiibo sida uu kula yahay:
Waxaa Aqrisay 827